As of Fri, 14 Aug, 2020 16:25
कालिञ्चोक गाउँपालिकाको केन्द्र विवादका कारण रातारात कार्यालय नै सारिएको छ । कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नं. ५, ६ का वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा आइतबार राति सुनखानीमा रहेको कार्यालयबाट महत्वपूर्ण कागजात निकालेर वडा नं. ५ बान्दे्रथली पु¥याएका छन् । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कुर्सीसहित लिएर बिहानसम्म बान्द्रेथलीका रत्नबहादुर खड्काको घरमा नयाँ कार्यालय स्थापना गरेका छन् । खड्काको घर गाउँपालिका कार्यालयका लागि भाडामा लिएका हुन् ।
उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिए
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । उपनिर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि जिल्ला निर्वाचन अधिकृत तोकिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
सभामुख पद राजनीतिक भकुण्डो जस्तो
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सभामुखको पदलाई पार्टी भित्र र बाहिर राजनीतिक गर्न थालेको छ । सभामुख पद पार्टीले आफै भित्र राख्ने वा अन्य दलसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा पार्टी भित्र छलफल चलिरहेको पार्टी निकटका एक नेताले जनाएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी म्यानमारबाट जापानतिर
म्यानमार गणतन्त्र सङ्घका राष्ट्रपति ऊ विन मिन्तको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा म्यान्मामा भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पाँचदिने राजकीय भ्रमण पूरा भएको छ । उनी गत असोज २९ गते म्यानमा पुगेकी थिइन् । उनले आइतबारदेखि यही कात्तिक ५ गतेसम्म जापान भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री बिहीबार बाकु जाने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउँदो बिहीबार असंलग्न आन्दोलनको १८ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन अजरबैजानको बाकु जाने भएका छन् । बाकुमा यही अक्टोबर २५ र २६ तारिखमा शिखर सम्मेलन हुँदैछ । परराष्ट्र मन्त्रालयलले आइतबार औपचारिक रुपमा घोषणा गरे अनुसार भ्रमण दलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहरु सामेल हुनेछन् ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट विजयी भएका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पार्टीका तर्फबाट विजयी भएका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुलाई प्रशिक्षण दिन लागेको हो । प्रशिक्षण कात्तिक १ र २ गते भक्तपुरमा हुनेछ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नेपाल भ्रमणका लागि सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी म्यानमारको राजकीय भ्रमणका लागि बुधबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले त्यहाँका राष्ट्रपति ऊ विन मिन्तको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा कात्तिक ३ गतेसम्म त्यहाँको राजकीय भ्रमण गर्नेछिन् ।
सांसद गुरुङविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी
२०७४ वैशाखको स्थानीय चुनावलगत्तै दोलखाका वीरध्वज खड्कामाथि काठमाडौंको गौशालामा आक्रमण भएको थियो । खड्काले सांसद गुरुङसमेतको संलग्नतामा आफूमाथि आक्रमण भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएका थिए । सोही आधारमा उनीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको बताइएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणले सम्भावनाको अथाह ढोका खुलेको र हिजोका सपनाहरु योजनामा बदलिन सघाएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना एवं सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महेश्वर दाहाललाई अष्टेलियाका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेकी छन् ।
रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद अफताब आलमको सेवासुविधा र पारिश्रमिक रोक्का भएको छ । फौजदारी अभियोग लागेका सांसद आलम पक्राउबारे सोमबार संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गरेको छ ।